ZTE Axon १०s प्रो MWC २०२० मा प्रस्तुत गरिनेछ Androidsis
ZTE Axon 10s Pro MWC 2020 मा आइपुग्नेछ
ZTE Axon 10 प्रो 5G
ZTE एक ठूलो तरिका मा बजार मा आफ्नो फिर्ता मा काम गरीरहेको छ। एक पटक जब उनीहरु आफ्नो समस्याहरु लाई पछाडि छोडेर जान्छन्, कम्पनीले 5G मा आफ्नो बिक्री लाई बढावा दिन को लागी आफ्नो आशा राखीरहेको छ। तेसैले, हामी आशा गर्न सक्छौं कि त्यहाँ तपाइँको भाग मा धेरै फोनहरु छन् कि अनुकूलता हुनेछ। मोडेल मध्ये एक ZTE Axon 10s प्रो हुनेछ।
यो ZTE Axon 10s प्रो को एक हुनेछ यसको उच्च अन्त दायरा भित्र चिनियाँ निर्माता को flagships। नयाँ अफवाहहरु अनुसार, यो मोडेल आधिकारिक रूप मा बार्सिलोना मा MWC २०२० मा प्रस्तुत गर्न जाँदैछ। त्यसैले एक दुई महिना मा यो अन्ततः आधिकारिक हुनेछ।
अहिले को लागी यो नयाँ ZTE Axon 10s प्रो को बारे मा केहि विवरणहरु छन्, यद्यपि यो ज्ञात छ कि यो 5G मूल रूप बाट आउनेछ, यस सन्दर्भमा दोस्रो उच्च अन्त। यो सम्भव हुनेछ तथ्य यो उपकरण को लागी धन्यवाद यसको प्रोसेसर को रूप मा स्नैपड्रैगन 865 हुनेछ, जसले तपाइँलाई प्रदर्शन को मामला मा महान शक्ति दिनेछ।
यस फोन को बारे मा अझै केहि भनिएको छैन, यद्यपि कम्पनी को अध्यक्ष कि टिप्पणी यो मात्र उत्पादन हो कि उनीहरु प्रस्तुत हुनेछैनन् MWC २०२० मा। यद्यपि उनीहरुले थप विवरण खुलाएका छैनन्, यो आशा छ कि त्यहाँ यस कार्यक्रम मा ब्रान्ड द्वारा धेरै फोन हुनेछ, यसैले। शुभ समाचार।
यस तरीकाले, कम्पनी मा फर्कने आशा छ फोन बजार मा उपस्थिति प्राप्त। यो ZTE Axon 10s प्रो एक मोडेल हुन सक्छ उच्च-अन्त एन्ड्रोइड दायरा भित्र मा विचार गर्न को लागी 2019. कम से कम ब्रान्ड को लागी यो धेरै बजार क्षेत्रहरुमा फोनहरु को लागी महत्वपूर्ण छ।
केहि हप्ताहरुमा पक्कै अधिक डाटा हुनेछ फोन को नयाँ दायरा को बारे मा चिनियाँ ब्रान्ड बाट, यस ZTE Axon 10s प्रो को साथमा। विश्वव्यापी रूपमा यसको बिक्री बढाउने नयाँ प्रयास, जुन संयुक्त राज्य अमेरिका संग यसको समस्याहरु पछि धेरै गिरावट आएको छ। के उनीहरु फिर्ता उड्न सक्षम हुनेछन्?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » ZTE » ZTE Axon 10s Pro MWC 2020 मा आइपुग्नेछ
वनप्लस T टी र T टी प्रो को "अप्रत्याशित" अनुकूलन चमक
विश्वव्यापी रूपमा पहिरनयोग्य बिक्री जारी छ